Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ndị njem nlegharị anya na Hawaii: Anyị chọrọ ịhụ obere gị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ndị bi na Oahu mebere ya, yana mmekorita ya na Obodo na County nke Honolulu na Bureau Visitors Bureau (OVB), Oahu Destination Management Action Action (DMAP) na -akọwapụta mpaghara mkpa yana ihe ngwọta maka ịkwalite ogo ndị bi na ya. ndụ ma melite ahụmịhe onye ọbịa. Ihe mbụ dị na atụmatụ ahụ bụ ibelata ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa. Njem nlegharị anya bụ ọkwọ ụgbọ ala kacha ukwuu na Hawaii wee gbasaa onwe ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ọrụ, ụgbọ njem na azụmaahịa.
A chịkọtara nzaghachi ndị obodo n'oge ngosipụta mebere abụọ yana mpempe ntinye n'ịntanetị.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) ebipụtala 2021-2024 DMAP, ntuziaka iji wughachi, kọwaa ma tọgharịa ntụzịaka njem na Oahu.
Atụmatụ dabere na obodo bụ akụkụ nke ọrụ HTA na-aga n'ụlọ Malama Kuu (na-elekọta ụlọ m hụrụ n'anya) yana mbọ ya na-agba ọsọ ọsọ iji jikwaa njem nlegharị anya n'ụdị mmegharị.
"Anyị nwere ekele maka ndị bi na Oahu bụ ndị sonyere na usoro DMAP ma jiri ịnụ ọkụ n'obi nye echiche ha dị iche iche, kwurịtara ihe ịma aka dị iche iche metụtara njem na mpaghara ha ma nyere aka ịhazi atụmatụ dị mkpa nke dị mkpa maka ọdịmma obodo," ka John De Fries kwuru. , Onye isi oche HTA na onye isi ala. "Ọ bụ maka imekọ ihe ọnụ na ịga n'ihu ọnụ iji hụ ebe a hụrụ n'anya na ibe ya n'anya, dị ka ndị Oahu si chọọ."
DMAP gbadoro ụkwụ na mmemme ndị obodo, ụlọ ọrụ ọbịa na ngalaba ndị ọzọ chere na ọ dị mkpa n'ime afọ atọ. Ntọala nke OMA DMAP dabere na HTA 2020-2025 Atụmatụ Atụmatụ, na omume ndị a dabere na ogidi anọ na -emekọ ihe ọnụ - Akụ eke, ọdịbendị Hawaii, Community na Ahịa Ahịa.
“Oahu bụ ebe pụrụ iche ma pụọ ​​iche n'ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa n'ihi ịma mma ya na ọmarịcha ndị mmadụ. Site n'ịrụkọ ọrụ ọnụ dị ka obodo ilekọta akụ anyị, anyị na -emepụta gburugburu ebe ọdịbendị anyị, ala anyị na mmiri anyị, akụ na ụba anyị na mmekọrịta anyị nwere ike ime nke ọma, "Onye isi obodo Rick Blangiardi kwuru.
Ọ gara n'ihu, "N'ịrụ ọrụ na ndị njem nlegharị anya na Hawaii na atụmatụ njikwa ebe njedebe nke Oahu, Obodo na County nke Honolulu ga-elekwasị anya n'ihe atọ dị mkpa nke obodo: Chebe saịtị anyị kachasị ewu ewu ma jikwaa ahụmịhe maka onye ọ bụla na-eleta ha. -mgbazinye oge iji gaa mpaghara zones, ma bulie ojiji nke nhọrọ njem njem metụtara ndị ọbịa. ”
Kọmitii na -ahụ maka nlekọta nke Oahu mepụtara omume ndị a, gụnyere ndị bi na -anọchite anya obodo ha bi, yana ụlọ ọrụ ndị ọbịa, ngalaba azụmaahịa dị iche iche, yana ndị otu anaghị akwụ ụgwọ, yana ntinye obodo. Ndị nnọchi anya sitere na Obodo na County nke Honolulu, HTA na OVB nyekwara ntinye n'ime usoro a niile.
Belata ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na Oahu ka ọ bụrụ ọkwa a na -achịkwa nke ọma site n'ịchịkwa ọnụ ọgụgụ ebe obibi ndị ọbịa na inyocha mgbanwe maka iji ala eme ihe, zoning na ọdụ ụgbọ elu.
Mejuputa mmemme nkwukọrịta njem nlegharị anya tupu ọ bịarute iji kwado omume nkwanye ugwu na nkwado.
Chọpụta saịtị ma mejuputa atụmatụ nlekọta maka isi ọkụ na Oahu.
Mụbaa itinye mmanye na njikwa ọrụ nke saịtị na ụzọ ụkwụ.
Zụlite usoro ndoputa iji nyochaa ma jikwaa ndị ọrụ na akụ sitere n'okike na saịtị ọdịbendị.
Guzobe “Ụgwọ njem nlegharị anya” nke na -akwado mmemme iji megharịa akụ Hawaii, chekwaa akụ sitere n'okike, na lebara ụgwọ nchekwa nchekwa anya.
Zụlite ma mejuputa mmemme ịre ahịa iji dọta ndị njem na-enwe mmetụta dị mma bụ ndị na-ebute gburugburu, ọdịbendị na itinye ego n'ime obodo anyị.
Gaa n'ihu na -emepe ma na -eme mmemme "Zụrụ Mpaghara" iji kwalite ịzụrụ ngwaahịa na ọrụ mpaghara iji debe ego na obodo anyị ma belata akara ukwu carbon.
Jikwaa ojiji ndị ọbịa jiri ụgbọ ala dị ka njem na Oahu.
Soro ndị mmekọ obodo rụkọọ ọrụ, ịzụlite, gbaa ume, na ịkwado nkwado, ahụmịhe a na -agwọta nke na -eme ka ndị bi na ndị ọbịa baa ọgaranya.
Ihe dị ọhụrụ na Bahamas na Ọktọba